ျပည္တြင္း သတင္း Archives - MinSayYar
Category: ျပည္တြင္း သတင္း
ext ျပည္တြင္း သတင္း
ဘစိုင်းကိုထားခဲ့ပြီး ငြိမ်းမြတ်သူကို ဝန်းရံရမယ်လို့ တခါမှ မတွေးဖူးဘူး … ဘာလို့လဲဆိုတာ ဖတ်သာကြည်လိုက် စာဖတ်သူအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ ခင်ဗျ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ စကားပုံမှာ လူအကြောင်း ပေါင်းမှသိ ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးကို အားလုံးကြားဖူးကြမှာပါမိတ်ဆွေစစ် မိတ်ဆွေမှန် ဆိုတာကို ဒုက္ခဖြစ်ချိန်မှ သိရတယ်လို့လဲ ပြောကြသေးတယ်မို့လား ခင်ဗျာ ဒါတွေကို ဘာလို့ ပြောနေတာလဲ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကြီး အမှောက်ဖုံးချိန်မှာ ပြည်သူတွေ့ရဲ့ အလင်းတိုင်လို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ အနုပညာရှင်တိချို့ကကြောက်တက်တာလား … သူတို့ပိုင်တဲ့ စည်းစိမ် ဥစ္စာလျော့မှာ ကြောက်လို့လားမသိဝတ်ကျေ တန်းကျေသာ လှုပ်ရှားနေတာ တွေ့ရပါတယ် ဒီလို ဝတ်ကျေတန်းကျေ လုပ်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘစိုင်းကို မန်းလေးသား တယောက်ကစိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာ Fan အင်အားအတောင့်ဆုံးဆယ်စုနှစ်မက အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေမရေတွက်နိုင်ဘူး Cosmetics […]
လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ပိုင်တံခွန် နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် တို့ကို တရုတ်နိုင်ငံက သတင်းဌာနက ဖော်ပြခြင်းခံလိုက်ရ
လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ပိုင်တံခွန် နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် တို့ကို တရုတ်နိုင်ငံက သတင်းဌာနက ဖော်ပြခြင်းခံလိုက်ရ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ပိုင်တံခွန် နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် တို့သုံးဦးက တော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုကိုယ်စီရရှိနေကြတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် ။ သူတို့သုံးယောက်လုံးက လတ်တလောမှာဆိုရင် ပြည်သူပရိသတ်တွေ ဘက်ကနေ အခိုင်အမာရပ်တည်ပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အတူ တစ်သားတည်းထပ်တူကျတဲ့ သူတိုသုံးယောက်က ပြည်သူတစ်ယောက်နေရာကနေ ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုး အတွက် တာဝန်ကျေပွန်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တံခွန်ဟာဆိုရင် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ နေ့တိုင်းလိုလို ရဲဝင့်တက်ကြွစွာပါဝင်ပြီး ပြည်သူလူထုကို အရှေ့ဆုံးကနေ ကာကွယ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်မှုံရွှေရည် အ နေနဲ့ကလည်း တရားစခန်းကပြန်ရောက်ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ရင်တွင်းဆန္ဒတွေကို ဖော်ပြတောင်းဆိုခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။စိုင်းစိုင်းကတော့ လမ်းပေါ်က ပြည်သူတွေအမောပြေသောက်ဖို့ အချိုရည်တွေနဲ့ ရေသန့်တွေ […]
မန္တလေးတွင် ဒေါ်ဝင်းမြမြ အဖမ်းခံရ
မန္တလေးတွင် ဒေါ်ဝင်းမြမြ အဖမ်းခံရ ဧရာဝတီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၂၁မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေမှ ဝင်ရောက် အရွေးခံပြီး အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီမှ ဒေါ်ဝင်းမြမြ ကို ယနေ့မနက်ပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားသည်။ ဒေါ်ဝင်းမြမြသည် NLD ပါတီ စတင် တည်ထောင်ကတည်းက ပါဝင်လာသည့် အမာခံ ပါတီဝင်တဦး ဖြစ်သကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် NLD ခေါင်းဆောင်များကို လုပ်ကြံရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့်၂၀၀၃ ဒီပဲယင်းအရေးခင်း၌ ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူများ အနက် တဦး အပါအဝင်လည်း ဖြစ်သည်။credit unicode မနျတလေးတှငြ ဒေါဝြငြးမှမှ အဖမြးခံရ ဧရာဝတီ၊ ဖဖေောဝြါရီ ၂၇၊ ၂၀၂၁မနျတလေးတိုငြးဒသကှေီး၊ စဉ့ကြိုငမြှို့နယြ ပှညသြူ့လှှတတြောြ မဲဆနျဒနယမြှမှေ ဝငရြောကြ အရှေးခံပှီး […]
မောင်းသူမဲ့ လေယဉ်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို မြန်မာပြည်မှာ ဖယ်ရှားလို့ရမလား?
မောင်းသူမဲ့ လေယဉ်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို မြန်မာပြည်မှာ ဖယ်ရှားလို့ရမလား? မြန်မာပြည်မှာ မအလက ရွေးကောက်ခံအစိုးရထံက ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှာ အာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ မဲစာရင်းမှားလို့ အရေးပေါ် အာဏာသိမ်းလိုက်ရတာမျိုး မဟုတ်ခဲ့ပါ။ သူအာဏာမသိမ်းခင် တိုင်ပင်ခဲ့ပြီး သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ထိပ်ပိုင်းကို ဖမ်းထိန်းလိုက်ရင် သူ့ကိုဘယ်သူမှ မတော်လှန်ဘူးလို့ တွက်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူက အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပက စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှာကို တွက်ထားခဲ့သလို ဒါ့ကြောင့် တိုင်းပြည်စီးပွါးရေးအပေါ် ထိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလဲ တွက်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မအလက အဲ့ဒီလိုစီးပွါးရေး ပိတ်ဆိုတာကို တရုတ်နဲ့ အာဆီယံရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ ပြန်ဖာထေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ မအလဟာ တရုတ်က သူ့ကို ကုလမှာ ဗီတိုသုံး ကာကွယ်ပေးမှာမိုလို့ တိုင်းပြည်ကို ၂၀၁၀ လောက်ကနေ နောက်ပြန်စဖို့ […]
ဒဂုံတောင်မှာ ရပ်ကွက်ကပိတ်ထားတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတစ်ရုံးကို ရဲတပ်ဖွဲ့ လာဖွင့် ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း အမှတ် ၁၄၀ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကို ရဲယာဥ်တန်းကား လေးစီး၊ လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ လာရောက်ပြီးရပ်ကွက်နေသူတွေက ပိတ်သိမ်းထားတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး တံခါးကို လာရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီက ခန့်အပ်ထားတဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို လက်ခံနိုင်ဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ညနေ ၄ နာရီခန့်က ရုံးကို လာဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လာရောက်ဖွင့်လှစ်ရာမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မပါရှိဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့ကပဲ လာရောက်ဖွင့်လှစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်အပြီးမှာတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရပ်ကွက်နေသူတွေက စုရုံးရောက်ရှိလာပြီး အဲဒီရုံးတံခါးကို သူတို့ကိုယ်ပိုင်သော့တွေနဲ့ ထပ်မံပိတ်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက် ခန့်ထားခံရတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်ရှေ့မှာ စုဝေးဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။credit unicode ဒဂုံတောငျမှာ ရပျကှကျကပိတျထားတဲ့ အုပျခြုပျရေးမှူးရုံးတဈရုံးကို ရဲတပျဖှဲ့ လာဖှငျ့ ဒဂုံမှို့သဈ တောငပြိုငြး […]
မြန်မာစစ်ကောင်စီကို ထောက်ခံတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ ထိုင်း၀န်ကြီးချုပ် ငြင်းဆို မြန်မာ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီး ဆိုပြီး ခန့်ထားတဲ့သူကို ဘန်ကောက်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အပေါ်၊ ထိုင်း၀န်ကြီးချုပ် ပရာယွတ် ချန်အိုချာက ဖြေရှင်းချက် ထုတ်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းက၊ ဦး၀ဏ္ဏမောင်လွင်နဲ့ တွေ့ခဲ့တာဟာ စစ်ကောင်စီကို အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် မဟုတ်ဘူးလို့ ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။ တွေ့ဆုံကြတုန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရေး အခြေအနေ အပြောင်းအလဲတွေကို တစ်ဘက်က ပြောလာတာကို နားထောင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ အတူ ထိုင်းလည်းပဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို ကြား၀င် ညှိနှိုင်းပေးလာဖွယ် ရှိတယ် ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း ထိုင်း၀န်ကြီးချုပ်က ပယ်ချပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကွဲလွဲမှုတွေဟာ သူတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာ ဖြစ်တယ်။ […]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ရှေ့ ပရိတ်ရွတ် ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ရှေ့ ပရိတ်ရွတ် ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ် စစ်အာဏာသိမ်းသည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အခြားဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မေတ္တာပို့ဆုတောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုတောင်းပွဲကို တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ခြံအမှတ် ၅၄ ၊နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ နေအိမ်ရှေ့တွင် ဒီကနေ့ ဖော်ဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့၊ မနက်အစောပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ရှေ့ ပရိတ်ရွတ်ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ် စစ်အာဏာသိမ်းသည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အခြားဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မေတ္တာပို့ဆုတောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုတောင်းပွဲကို တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ခြံအမှတ် ၅၄ ၊နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ နေအိမ်ရှေ့တွင် ဒီကနေ့ ဖော်ဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့၊ မနက်အစောပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။credit unicode ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညနြအေိမရြှေ့ ပရိတရြှတဆြုတောငြးပှဲပှုလုပြ စဈအာဏာသိမြးသညြ့ ဖဖေောဝြါရီလ ၁ ရကနြေ့ကစပှီး ဖမြးဆီးထိနြးသိမြးခံထားရတဲ့ ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညနြဲ့ အခှားဖမြးဆီးခံထားရသူတှပှနေလြညလြှတမြှောကရြေးအတှကြ မတျေတာပို့ဆုတောငြးနကှတောဖှဈပါတယြ။ ဆုတောငြးပှဲကို တကျကသိုလရြိပသြာလမြး၊ခှံအမှတြ […]
ကော့ကရိတ်တွင် ကေအဲန်ယူ နှင့် စစ်တပ် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
ကော့ကရိတ်တွင် ကေအဲန်ယူ နှင့် စစ်တပ် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ။ ကေအိုင်စီကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် တောင်ဘက် ရွာသစ်ရွာတွင် ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီကျော်တွင် ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ ၆ တပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် မြန်မာ့ တပ်မတော်တို့ကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ကော့ကရိတ်မြို့နှင့်မနီးမဝေးရှိ အံဖကြီးကျေးရွာတွင် လုံခြုံရေးလာယူရန် စစ်ကား သုံးစီးဖြင့် တက်လာသည့် မြန်မာ့တပ်မတော်အား ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ ၆ တပ်ဖွဲ့က တားမြစ်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ ၆ အရာရှိတစ်ဦးက ကေအိုင်စီသို့ ယခုလို ပြောသည်။ ဗမာစစ်တပ်က အံဖကြီးမှာ လုံခြုံရေးလာယူမယ်လို့ ခွင့်တောင်းလာတယ်။ တောင်းတော့ ရှေ့မှာရှိတဲ့ ကျနော်တို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အထက်က ဘာမှပြောလာတာမရှိဘူး။ […]
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ပျက်သွားပြီဟု ကော်မရှင် ဥက္ကဌသစ် ဦးသိန်းစိုး ပြော
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ပျက်သွားပြီဟု ကော်မရှင် ဥက္ကဌသစ် ဦးသိန်းစိုး ပြော ဧရာဝတီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၂၁အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် (NLD) ပါတီက သောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ပယ်ပျက် သွားပြီဟု စစ်ကောင်စီက ခန့်အပ်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌသစ် ဦးသိန်းစိုးက ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ယနေ့ နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ ရုံးတွင် ကျင်းပသည့် ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၅၃ ခုတို့ တွေ့ ဆုံပွဲတွင် ကော်မရှင်အသစ်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယခုဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်နေသူ မြန်မာ အမျိုးသား ကွန်ဂရက်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်က […]
လှည်းတန်းမှာ စစ်ကောင်စီ တပ်တွေ သေနတ်နဲ့ ဗုံးတွေပစ် လူစုခွဲ
လှည်းတန်းမှာ စစ်ကောင်စီ တပ်တွေ သေနတ်နဲ့ ဗုံးတွေပစ် လူစုခွဲ လှည်းတန်းမှာ စစ်ကောင်စီ တပ်တွေ သေနတ်နဲ့ ဗုံးတွေပစ် လူစုခွဲရန်ကုန်မြို့ လှည်းတန်း စိန်ဂေဟာအရှေ့အထိ တက်လာတဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့ လုံခြုံရေးတပ်တွေဟာ ဒီနေ့ မနက် ၁၁ နာရီ ၅၀ လောက်မှာ ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကို သေနတ်တွေ၊ အသံဗုံးတွေနဲ့ ပစ်နေပါတယ်။ ဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကလည်း နောက်ဆုတ်လူစုခွဲနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ လှည်းတန်းမှာ စစ်ကောင်စီ တပ်တွေ သေနတ်နဲ့ ဗုံးတွေပစ် လူစုခွဲ ရန်ကုန်မြို့ လှည်းတန်း စိန်ဂေဟာအရှေ့အထိ တက်လာတဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့ လုံခြုံရေးတပ်တွေဟာ ဒီနေ့ မနက် ၁၁ နာရီ ၅၀ လောက်မှာ ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကို သေနတ်တွေ၊ အသံဗုံးတွေနဲ့ ပစ်နေပါတယ်။ ဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကလည်း နောက်ဆုတ်လူစုခွဲနေတာ တွေ့ရပါတယ်။credit […]